Ezuru ozi nkeonwe ndị njem na mwakpo cybersecurity nke Bangkok Airways
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Ezuru ozi nkeonwe ndị njem na mwakpo cybersecurity nke Bangkok Airways
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nchọpụta izizi nke ihe merenụ pụtara iji gosi na enwere ike ịnweta ụfọdụ data nkeonwe bụ aha ndị njem, aha ezinụlọ, mba, okike, akara ekwentị, email, adreesị, ozi kọntaktị, ozi paspọtụ, ozi njem akụkọ ihe mere eme ozi kaadị akwụmụgwọ, yana ozi nri pụrụ iche.
Bangkok Airways Public Company Limited bụ onye e mere mwakpo ịntanetị.
Mwakpo ahụ mere ka ịnweta ozi ozi ụgbọ elu n'enweghị ikike na nke iwu na -akwadoghị.
A kọọrọ ndị uwe ojii Royal Thai ihe ahụ merenụ yana inye ndị ọchịchị dị mkpa ọkwa.
N'August 23, 2021, Bangkok Airways Public Company Limited chọpụtara na ụlọ ọrụ ahụ bụ mwakpo cybersecurity nke butere na sistemụ ozi ya na -enwetaghị ikike na iwu akwadoghị.
Mgbe nchọpụta dị otú ahụ, Bangkok Airways ozugbo mere ihe iji nyochaa ma nwee ihe omume ahụ, site n'enyemaka nke otu ndị na -ahụ maka nchekwa cybersecurity. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ na -enyocha, ngwa ngwa, iji nyochaa data mebiri emebi na ndị njem emetụtara yana ịme usoro dị mkpa iji wusie ike usoro IT ya.
Nchọpụta mbụ nke ihe ihe merenụ pụtara iji gosi na enwere ike nweta ụfọdụ data nkeonwe nke bụ, aha ndị njem, aha ezinụlọ, mba, okike, akara ekwentị, email, adreesị, ozi ịkpọtụrụ, ozi paspọtụ, ozi njem akụkọ ihe mere eme, ozi kaadị kredit ele mmadụ anya n'ihu, na ọpụrụiche ozi nri. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ na -egosi na ihe ahụ emetụtaghị sistemụ nchekwa ụlọ ọrụ ma ọ bụ nchekwa ikuku.
A kọọrọ ndị uwe ojii Royal Thai ihe omume a yana inye ndị ọchịchị dị mkpa ọkwa. Maka usoro mgbochi nke mbụ, ụlọ ọrụ ahụ na -atụ aro ndị njem nke ọma ka ha kpọtụrụ ụlọ akụ ha ma ọ bụ ndị na -eweta kaadị kredit ma soro ndụmọdụ ha ma gbanwee okwuntughe ọ bụla ozugbo enwere ike.
Na mgbakwunye na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga -achọ ịdọ ndị njem aka na ntị ka ha mara oku ọ bụla na -enyo enyo ma ọ bụ na -achọghị na/ma ọ bụ ozi ịntanetị, ebe onye mwakpo ahụ nwere ike na -ekwu na ya bụ Bangkok Airways ma nwaa ịchịkọta data nkeonwe ya site na aghụghọ (nke a maara dị ka 'phishing'). ). Companylọ ọrụ (Bangkok Airways) agaghị akpọtụrụ ndị ahịa ọ bụla na -arịọ maka nkọwa kaadị kredit yana arịrịọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ụdị ihe a emee, ndị njem kwesịrị ime ihe iwu kwadoro.
W. Kami ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 28, 2021 na 15:43
Ịdọ aka na ntị Bangkokair ọ bụ eziokwu ka ọ bụ adịgboroja n'onwe ya?
Ọ na -eche m n'ihi na ha na -eji aha m eziga ozi - ọ bụghị naanị 'Ezigbo onye ahịa'.
Ọzọkwa nọmba ekwentị abụọ enyere dị iche na ọnụọgụ ha na weebụsaịtị ha ugbu a?